अन्य खबरहरु Archives - Nepali in Australia
Category: अन्य खबरहरु
गोविन्द बिक नौ वर्षका थिए । उनका बुवा बि ते । आमा कलावती बिकले तीन छोरा र एक छोरीलाई मजदुरी गरेर हुकाईन । तीन दाजुभाईमा उनी माहिला थिए । उनीभन्दा अगाडि एक दिदी र दाई थिए । पछाडि दुई भाई । सुकुम्बासी परिवार । सहारा केही थिएन । बुवा बि तेपछि परिवारको पालनपोषणको अभिभारा आमा […]
October 19, 2020 October 19, 2020 EditorLeaveaComment on खुसीको खबर :दशैं-तिहार नजि`किदै गर्दा सोच्नै नसकिने गरि घट्यो` खसी-बोकाको मासुको मु`ल्य
दशैं-तिहार नजि`किदै गर्दा सोच्नै नसकिने गरि घट्यो खसी-बोकाको मा`को मु`ल्य ! । दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै जिउँदो खसीबोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको छ। दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडमा आइतबार बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिउँदो खसी बोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरेको हो। किसान, व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सहकारीका […]
October 19, 2020 EditorLeaveaComment on काठमाडौं उपत्यका बासीलाई अत्यन्तै दुखद खबर,
काठमाडौं- काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ६९८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जस अनुसार का काठमाडौँमा १ हजार ४६९ , भक्तपुरमा ९९ र ललितपुरमा १३० जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले बताए । त्यस्तै आज देशभर बितेको २४ घण्टामा देशभर […]
October 16, 2020 autherLeaveaComment on नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै प्रतिकेजीमा ह्वात्तै घट्यो मासुको मूल्य, कारण यस्तो छ !
काठमाडौं । दशैंको मुखैमा आइपुग्दा ब्रोइलर कुखुराको मासुले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । कुखुराको मासुको मूल्य बढेर नभई घटेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो । लकडाउन खुलेलगत्तै मूल्य बढेर आकाश छुने अनुमानविपरीत कुखुराको मासु उकालो नभई ओरालो लाग्न थालेको छ। लकडाउनको समयमा उत्पादन घटेकाले व्यवसायीहरूले लकडाउनपछि मूल्य बढेर किलोको ५०० रूपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरेका […]
काठमाडौ । भदौ, असोज महिनाको यो चर्किदो घाम । टन्टलापुर घाममा ५० केजीको भारी बोकेर उकालो बाटो हिड्दा कस्तो होला ? हामी मध्ये धेरैले यो दुख भोगेका पनि होलौ । तर ठूलो उमेरकालाई त्यति पिडा नहोला । बाल्यकालमा के होला ? हुन त तपाई कोहीले यही शब्द पढ्नासाथ आफ्नो बाल्यकाल पनि सम्झिनुभयो होला । सम्झनुस् […]
October 14, 2020 October 14, 2020 autherLeaveaComment on सात महिनाको ग’र्भ बो’काएर केटो फ’रार-भिडियो हेर्नुहोस
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला । काठमाडौं, २८ असोज । भारतका सेना प्रमुखले यही कात्तिक महिनामा नेपालको भ्रमण गर्न सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले भारतका सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभानेकोलाई नेपाल भ्रमणको लागि औपचारिक पत्र पठाउन लागेको जनाएको छ । नरभानेको नेपाल भ्रमण कात्तिक महिना भित्रै गराउने गरी […]
काठमाडौमा अनौठा घ`टना बढ्न थालेका छन् । कोठा खोज्ने बहा`नामा आउने युवाहरुले लु टे र हिडेको घ`टना सेलाउन नपाउँदै भक्तपुरमा जग्गा किन्ने वहानामा पुगेका तीन जनाले एक जनाका ज्यान नै लिएका छन् । दुई महिनाअघि दुई युवक कोठा खोज्दै पेप्सीकोलास्थित एउटा घरमा पुगे। पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्ट नजिकै घर भएकी पवित्रा विडारी उप्रेतीको घरमा डेरा खोज्दै […]
२८ आश्विन, काठमाडौं । कोरोना भाइ`रसको फैलिँदो संक्र`मणलाई ख्या`ल गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारलाई यस पटक घटस्था`पना देखि नै सरकारी कार्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारको नियमित दसैं बिदा भने कात्तिक ७ गते (फूलपाती) देखि कात्तिक ११ गते सम्म मात्र छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, कोभिड–१९ विपद् व्यव`स्थापन […]
October 14, 2020 October 14, 2020 autherLeaveaComment on फेरि आयो यस्तो निर्णय : कर्मचारीले दसैंमा बिदा नपाउने !
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीपछि सशस्‍त्र प्रहरी बलमा कार्यरत कर्मचारीले पनि दसैंमा बिदा नपाउने भएका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियान र शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुनुपर्ने भएकाले सशस्‍त्र प्रहरीले पनि दसैं बिदा नपाउने भएका हुन् । अत्यावश्यक बिदा भने पाउनेछन् । सशस्‍त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले कोरोना महामारीविरुद्ध परिचालन हुनुपर्ने र अन्य शान्ति सुरक्षाका जिम्मेवारीमा […]
काठमाडौ । विवाहमा जब बेहुलीको बुवा र दाजुहरु नै हत्कडीमा देखिएपछि त्यो विवाह कस्तो भयो होला ? सुन्दै अचम्म लाग्ने घटना भारतको बंगलुरुमा भएको छ । अहिले पनि सो विवाहको चर्चा जारी छ । हुन त एक विवाहको चर्चा हुनु स्वभाविक हो तर यो विवाहको चर्चाको कारण भने फरक छ । छोरीको विवाहको काम भइरहेको […]